“Wali waan ka fogahay bahalnimada Ronaldo iyo Messi” – Sadio Mané – Gool FM
(Liverpool) 03 Nof 2019. Xiddiga reer Senegal iyo kooxda Liverpool ee Sadio Mané ayaa sheegay inuu wali ka fog yahay heerka ay gaareen xiddigaha Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi.
Sadio Mané ayaa dhinaca kale tilmaamay inuu u sameyn doono wax walba si uu kaliya ugu dhawaado heerarkooda.
Sadio Mane ayaa xagaagii 2016-kii wuxuu yimid Liverpool, isagoo kaga soo dhaqaaqay kooxda Southampton adduun dhan 41 milyan oo euro, kaddib wuxuu noqday mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan uu ku tiirsan yahay tababare Jurgen Klopp.
Sadio Mané oo 27 jir ah, ayaa wuxuu bandhig fiican ka sameeyay Liverpool xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay 10 gool isla markaana sameeyay shan gool caawin kale, 15 kulan uu saftay dhamaan tartamada kala duwan.
Haddaba Sadio Mané ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada caalamiga ah ee “Goal.com” wuxuu ku sheegay:
“Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi waa bahalo waxaana u malaynayaa inaan wali iyaga ka fogahay”.
“Sida aan sheegay, waxaan sameyn doonaa inta karaankeyga ah si aan waxyar ugu soo dhowaado”.
Si kastaba ha noqotee, Sadio Mané ayaa wuxuu dhacayaa heshiiska uu haatan ku joogo kooxda Liverpool xagaaga 2023.